I-23 ENTLE YASELWANDLE YASEKHITSHI (IMIFANEKISO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi I-23 entle yaselwandle yasekhitshi (Imifanekiso)
I-23 entle yaselwandle yasekhitshi (Imifanekiso)
Wamkelekile kwigalari yethu yekhitshi yesitayile saselwandle. Le mifanekiso inezinto ezintle zoyilo lwasekhitshini elunxwemeni kunye nee-accents eziphefumlelweyo zaselwandle. Ngoyilo lonxweme ungazisa imvakalelo yokuba usekhaya lolwandle ukonwabela unyaka wonke. Khuthazwa zezi khitshi zesitayile solwandle ukuze ufumane iindlela zokubandakanya ezi zimvo kuyilo lwakho lwangaphakathi.
Kulo mfanekiso ungasentla iikhitshi eziphefumlelweyo zolwandle zisebenzisa isitayile esimhlophe seShaker esandula ukuya kwisiqithi sokutyela kunye nokuxhoma izitulo zebha. Ibala lesanti le-beige elinophahla lwesilingi, umgangatho, imilenze yebar stool kunye netafile yokutyela ikhumbuza ulwandle. Ifenitshala ebunjiweyo ithambisa uvakalelo ngokubanzi lwezixhobo zentsimbi ezingenasici. Izibane zeglasi ezigcinwe kubanikazi beenkanyamba kunye nokukhanya kombala wolwandle oluhlaza okwesibhakabhaka kongeza isitayile esikhulu kule khitshi yendlela yaselunxwemeni.
Amakhitshi eNdlu yaselwandle
Nokuba uhlala kufutshane nolwandle okanye awungekhe uyonwabele imfudumalo kunye nokumema ikhitshi lendlu yaselwandle. Ngeendlela ezifihlakeleyo zaselunxwemeni, i-pastels kunye nekhabhathi emhlophe, iitoni zokukhanya kwendalo kwaye mhlawumbi nokuba kukuhonjiswa okuncinci, unokuzisa ulwandle kancinci ekhayeni lakho.
Isiqithi solwandle esiluhlaza sasibhakabhaka kunye nomphambili wegranite, ikristale eluhlaza okwesibhakabhaka kunye neepatheni zokuphosa imilo yokuhambisa imvakalozwi yale cottage khitshi yoyilo iphefumlelweyo. Ithoni emnyama yomgangatho wokhuni olomeleleyo iyancoma itafile yomthi oqinileyo yesidlo sakusasa ejikelezwe yibhentshi emangalisayo yefestile. Isimbo esimhlophe esimhlophe seShaker esine-countertop kunye neglasi phambi kweekhabhathi ezijingayo nezixhobo zensimbi ezingenanto kwaye inika ikhitshi ukukhanya okucocekileyo nokucocekileyo. Indawo yokuhlala kwasekuseni enefestile ineekhabhathi zedrowa zokugcina ezongezelelweyo ezifunekayo.
Wamkelekile kwisiqithi esikweleenjiko esiphefumlelweyo esinekhitshi emhlophe ye-Shaker, i-arctic white quartz countertop ene-househouse sink, i-aqua glass backsplash, ithoni emnyama yomgangatho oqinileyo kunye nophahla lweplanga elinezibane ezihleliweyo kunye nezixhobo zentsimbi ezingenasici. Iintyatyambo zaseTropiki, indawo yombhoxo kunye neebhedi zeratt zibonisa indawo egudileyo yetropiki kwaye inika indawo efudumeleyo kwaye imeme usapho, abahlobo kunye neendwendwe. Uyilo oluncinci lwekhitshi luya kulunga ekhaya kwikhabhathi yaselwandle.
Le khitshi yesitayile esivulekileyo yekhitshi inika imibala emthubi naluhlaza okwesibhakabhaka epeyintiweyo iikhabhathi zesitayile seShaker ukunika indawo yonxweme kwindawo. Igumbi line-countertop yeplanga yesiqithi sekhitshi, izixhobo zentsimbi ezingenasinxibo, imigangatho yokhuni oluphakathi, izibane ze-mini-chandelier kunye nezitulo ze-oki zeenkuni zesitayile esigqibezela uyilo oluhle.
Inkqubo yoyilo ephefumlelweyo yaselunxwemeni inendawo yokutyela evulekileyo enefama yobhedu yokuntywila, ipompo yamanzi, ulwandle oluxineneyo oluhlaza okwephaneli yekhabhathi, i-quartz countertop, i-travertine flooring, iglasi engunxantathu kunye neendonga zesanti ezenziwe ngepeyinti zinika eli khitshi ukuziva kumnandi kwaye kumema ulwandle kwenye indawo.
Umbala okhanyayo weendonga ze-beige kunye ne-hue ethambileyo yeekhabhathi eziphakanyisiweyo eziluhlaza zinika le khitshi yesitayile yaselwandle imvakalelo ethambileyo kunye nehlaziyayo yokuphumla ngaselunxwemeni lolwandle. Itafile emhlophe yemarble yaseCarrara kunye nesinki engaphantsi kwentaba incoma izixhobo zensimbi ezingenasici. Izibane ezihonjisiweyo zeglasi ngaphezulu kwekhawuntara yesiqithi kunye nezinye izixhobo zomxholo wolwandle zigqiba uyilo loyilo.
Indlu yendlu eneloft inoyilo oluvulekileyo olunekhitshi elinemilo engu-L. Esi siqithi sinendawo yokupheka eyakhelwe-ngaphakathi kunye nekhawuntari engaphezulu esebenza njenge-nook yesidlo sakusasa. Isitayile somthi we-butcher-block style countertop iqinisekisa ngoyilo olumnyama lweplanga. Umgangatho weVinyl noyilo lwejometri ye-chic udala inkohliso yomda eyahlula ikhitshi kuyo yonke indlu. Isikimu sombala okhanyayo kunye nokuhonjiswa kweenkuni, ikhawuntari kunye nophahla kunika imvakalelo yokuhlala konxweme.
Uyilo lwekhitshi oluphefumlelweyo oluselunxwemeni lubonisa i-hue ethambileyo esetyenziselwa i-bar stool upholstery table napkins, amakhandlela kunye nevasi yeentyatyambo inika umbala opholileyo opholileyo. Umama weeperile chandelier wongeza indawo ekugxilwe kuyo kwindawo ephambili yokutya. Izibane zala maxesha e-chrome ziyancoma izixhobo zensimbi ezingenasici. Ikhabhinethi emhlophe ephakanyisiweyo yephaneli yekhabhinethi enezikhanyiso ezingaphantsi kwekhabhinethi zibonelela zombini, ukukhanya kwemisebenzi kunye nokukhanya okuqaqambileyo kumboniso wonxweme wolwandle. Itafile emhlophe emhlophe ifikelela kwisiqithi sakusasa sebhari enika ukucoceka okucocekileyo.
Isikimu sombala esingathathi hlangothi senza ukuba eli khitshi langoku liziva lifudumele, licolile kwaye liphumle kakhulu; ejonge kwimbonakalo yolwandle entle. Isitayile se-Shaker esimhlophe kunye negreyethi yekhabethe, isitrato esimhlophe se-quartz kunye nolwandle oluphefumlelweyo i-backsplash isincoma kakuhle kwaye ithambisa izixhobo zensimbi ezingenasici kunye neethoni emnyama yomgangatho onzima. Izibane zeglasi ezijingayo kunye nokukhanya okuphakathi kubonelela ngokukhanya okugqibeleleyo kule ndawo inkulu nekhitshi ebanzi, ngaphandle kokoyisa umbono oqaqambileyo ngaphandle.
Le khitshi yasekhaya enendawo ephefumlelweyo yaselunxwemeni, ikwenza ukuba ufune ukuya kwimowudi yeholide yonke imihla. Isimbo esimhlophe esimhlophe seShaker kunye nekhabhathi yeglasi yeDekton. Isiqithi esilula, esingenamikhono kunye nesomeleleyo sokutya kwindawo yokutya kwasekuseni kuqhelekile kuyilo lwefanitshala yaselwandle. Umgangatho okhanyayo womthi we-walnut uhamba kakuhle ngombala okhanyayo we-tan kwizitulo zebar kunye nezitulo zesidlo sangokuhlwa. Iikristale zeekristale zibonelela ngendlela ebalaseleyo kwesi siqithi nakwindawo yokutyela.
Uyilo lwekhitshi lwe-eclectic lubonisa iikhabhathi zesitayile seShaker ngombala ongwevu wematte odityaniswa kakuhle nomgangatho wokhuni olumnyama kunye nezixhobo zentsimbi zanamhlanje. Umbala we-ceramic tile backsplash kunye neepateni zejometri, izitulo zebar ezenziwe ngomthi kunye nokugqiba kobhedu izibane ezijikelezayo; Ukulinganisa iskimu sombala kunye nebhloko yokuthengisa iinkuni.
izihlangu zomtshato eziluhlaza
Indawo entle yasekhaya kunye neyasenyongweni yaseFrance ephefumlelweyo yikhitshi ephakanyisiweyo-yephaneli yekhabinethi ngokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kunye nokumpunga okugqityiweyo ngetheyibhile yemarble. Umgangatho wamatye amatye endalo amnandi athambileyo, udonga olumhlophe olwenziwe ngamaplanga, umgangatho ukuya kufestile iifestile zaseFrance, kunye nophahla olumhlophe olwenziwe ngebhokisi lubonisa uyilo oluhlaziyiweyo kunye nobugcisa. I-chandelier yesinyithi esenziwe ngobunkunkqele kunye nodonga lwescones lubhalansisa ngaphandle kwezixhobo zensimbi ezingenasici.
Ikhitshi laselunxwemeni lasekhaya libonisa ukukhanya kweetoni ze-Shaker, indawo yokutyela kwisiqithi esine-Baltic brown granite countertop. Umgangatho wamatye okwemvelo lukhetho oluhle kakhulu kule ndawo inezithuthi ezininzi ezifanelekileyo ukuba zihlangane kunye nosapho olukhulu kunye nokonwabisa iindwendwe kunye neendwendwe. Izixhobo zentsimbi ezingenasici zinika eli khitshi ukubukeka kwanamhlanje. Izibane ezixhonyiweyo kunye nezibane zemisebenzi ezigqityiweyo ngaphezulu kwekhawuntara yesiqithi zibonelela ngemithombo yokukhanya eyaneleyo yokutya kunye nokulungiselela ukutya. Idayimani eyenziwe ngomfanekiso wethayile ye-backsplash kunye nevumba lokutya okupheka ekhaya kukukhumbuza ikhitshi likaMakhulu.
Ukukhanya kunye nokukhanya okuqaqambileyo kwesitayile saselwandle ekhitshini kugxininiswa ngumgangatho wekhonkrithi omenyezelwayo, i-quartz emhlophe itheyibhile, izixhobo zentsimbi ezingenasici, izitulo zentsimbi ezinamathambo kunye nezibane ze-chrome. Idityaniswe nekhabhathi emhlophe yesitayile esimhlophe se-Shaker, i-backsplash eluhlaza okwesibhakabhaka engaphantsi-yintoni enokuba yeyamhlanje kunoko!
Umbala oqaqambileyo wekhitshi yanamhlanje wekhitshi yeplani yeplanga ye-veneer yekhabhathi edityaniswe nekhabhathi emhlophe ye-thermofoil kunye ne-countertop yentsimbi engenasici kunye nezixhobo. Izibane ezijingayo zangoku kule ndawo iphakanyisiweyo yophango lwengxangxasi kunye neentsimbi zamathambo ezigqibezela lo mxholo uyilo lwasekhitshini.
I-China eluhlaza okwesibhakabhaka i-porcelain dinning iseti ehambelana nezinto zokupheka eziluhlaza okwesibhakabhaka, iitafile zamaphepha kunye nezinye izinto zokucheba zigxininisa ikhitshi yesitayile saselwandle. Iikhabhathi ezimhlophe zakudala ezinekhawuntari emnyama yesepha, edityaniswa ngobuhle kunye nekhawuntara yesiqwengana esimnyama esenziwe ngamaplanga kunye neCarrara yemarble countertop kunye ne-sink. Umgangatho okhanyayo we-porcelain, i-ceramic tile backsplash emhlophe, phantsi kwezibane zekhabinethi, i-chrome izibane zependant kunye nezixhobo zensimbi ezingenasici zibonakalisa uyilo lwangoku lwekhitshi.
Ukukhanya kweminquma yeklasikhi yesitayile seKhakethi enesitayile esimhlophe sequartz esifikelela kwikhawuntara yesidlo sakusasa yesiqithi sithatha uyilo lwaselwandle oluphefumlelweyo loyilo lwekhitshi. Ukukhanya kwithayile yomthi okhuni kunye nokulinganisa ibha yomthi kuyilinganisa uyilo loyilo. Imibala emininzi yemibala yethayile yokubuyela umva ifaka uphawu lodonga. Izixhobo zentsimbi ezingenasici zilunge ngokugqibeleleyo kukuchukumisa kwale mihla.
Indawo yasekhitshini evulekileyo yanamhlanje ekhitshini enombala ongathathi hlangothi- isilingi esimhlophe esimnyama kunye nezibane ezihleliweyo, iifestile ezibanzi zaseFrance, i-backsplash emhlophe emhlophe, ikhabethe elimhlophe elimhlophe le-quartz countertop, i-black hi-gloss epeyintiweyo ikhabethe yesiqithi sasekuseni, ithowuni emnyama yomgangatho oqinileyo, izixhobo zensimbi ezingenasici kunye nezibane ze-chrome ezijikelezayo. Indawo yesidlo sakusasa yenzelwe ngombala ongacacanga wekhofi emdaka, ukukhanya okukhanyayo ngombala ukuphosa imiqamelo kunye nezitulo zesitulo ngekhandlela lesitayile sokukhanya.
Ikhitshi lesiFrentshi lendlu yasekhitshini ineempawu zokukhanya kweenkuni zeplanga kunye nethoni emnyama eveze imiqadi yeplanga kunye nomgangatho weplanga lomthi, ukugqitywa kwepeyinti yokudakumba kweekhabhathi ngombala omhlophe kunika eli khitshi imvakalelo efudumeleyo kodwa efudumeleyo. Izixhobo zensimbi ezingenasici zilungelelanisa uyilo loyilo kunye nokuchukumisa kwale mihla. Izibane ezihonjiswe ngombala wobhedu ngaphezulu kwendawo yokutyela kunye nendawo yemveli yokuma kophahla kunye nokuchasana nophahla lweethayile zemibala i-backsplash inendawo egxile ekubonakaliseni imibala yolwandle.
Iikhitshi zesitayile saselwandle ezisebenzisa umxholo wombala okhanyayo kunye neziqwenga ezingenazintsimbi ngokukhawuleza zivusa imibono yolwandle. Leli khitshi elenziwe ngobugcisa lisebenzisa umbala omhlophe omhlophe ovela kwiiplanga kunye neeplanga, i-ceramic tile backsplash kunye ne-inset style cabinetry idibanisa kakuhle ne-Calacatta marble countertop. Imibala engathathi hlangothi yemibala ekhanyayo yomgangatho okhuni, ibala elimnyama lethoni yesitulo sebar, izixhobo zensimbi ezingenasici, i-chrome ukugqiba ukukhanya kwezibane ezintathu kunye nezibane zekhandlela ukulinganisa uyilo loyilo.
Olu luhlu oluvulekileyo lwekhitshi lwangoku lubonisa umbala ococekileyo omhlophe weShaker wesitayile sekhabhathi kunye neCarrara marble countertop. Ifanitshala entle nenomdla ehambelana nendawo yesidlo sakusasa kunye nebha yesiqithi ivelisa isitayile esilula, esimnandi nesisondeleyo. Ukuphakama kodonga oluxhonywe kwiikhabhathi kuya kutsala amehlo akho kwisilingi engentla ukongeza into yoyilo eyoyikisayo kunye nesandi. Izibane ezijingayo kunye nesilinganisi sokulinganisa iskimu yoyilo.
Le khitshi ye-eclectic idibanisa zombini uyilo lwe-rustic kunye nolwanamhlanje kuyilo oluhle lwasekhitshini lolwandle. Uxinzelelo lweShaker lenqwaba yekhabhathi kunye nophahla lweplanga, intsimbi ye-chrome chrome canopy range hood, udonga olumhlophe lweplanga, ebonisa umxholo we-rustic. Imigangatho ekhanyayo yomthi okhuni, izixhobo zensimbi ezingenasici, kunye ne-Andromeda emhlophe imiphezulu yeetafile, izibane ezijingayo zeshishini kunye nezilinganisi zesikhumba kunye nokwenza i-twist yanamhlanje.
Uyilo lwekhitshi lonxweme luphefumlelwe ngumbono omkhulu wolwandle. Isiqithi sebha yesidlo sakusasa kunye ne-countertop ye-quartz ye-quartz ine-sink. Imibala ethambileyo kunye necolileyo yekhrim kunye ne-beige yekhabhathi, ifanitshala kunye nemigangatho yeenkuni; igxininiswe yitreyini ebunjiweyo engwevu yodongwe, kunye nomthunzi opholileyo wesingqengqelo esiluhlaza, umsebenzi wobugcisa oqingqiweyo kunye nezibane ezijingayo ezinjengenetha ezijika eli khitshi libe yindawo yolwandle.
Idilesi yeKhitshi yesiQinisekiso seKhitshi onokuyithanda:
143 Uyilo lweKhitshi eNtofontofo - Amakhitshi amahle aneziqithi - Amakhitshi aneebhari zesidlo sakusasa - Uyilo lweKhitshi loyilo - Iingcamango ezingama-77 zeSiqithi seKhitshi
Iingoma zothando zeedisney zemitshato
Ixabisa malini iringi yokuzibandakanya
indlela yokwazi ukuba idayimane iyinyani
izimvo zebhafu yokuhlamba